Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Mareegtan ("Siyaasadda") waxa ay sharraxaysaa nooca macluumaadka HealthPartners ay ka ururiyaan dadka soo booqda website-ka ee Moment Count iyo sida aan u isticmaalno una ilaalino macluumaadka aan ururino. Xeerkani wuxuu quseeyaa dhammaan booqdayaasha iyo isticmaalayaasha.
Xeerkani waxa kale oo uu qeexayaa sida aanu u maarayno oo aanu u ilaalino Macluumaadka Shakhsiyeed, oo ay ku jiraan Macluumaadka Caafimaadka ee aad nagu siisid mareegahan, sida aan u isticmaalno oo u wadaagno macluumaadkaas, iyo sida aad u isticmaali karto xuquuqdaada marka la eego macluumaadka aad wadaagto. Fadlan kan si taxadar leh u akhri.
Isbeddellada Hababka Qarsoonnimada Shabakadda
Waxaa laga yaabaa inaan cusboonaysiinno siyaasaddan waqti ka waqti. Isbeddeladu waxay khuseeyaan macluumaadka la ururiyey laga bilaabo taariikhda aan dhajino dib u eegista, iyo sidoo kale macluumaadka aan horey u haynay. Waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad booqato oo aad dib u eegto boggan si joogto ah si aad uga warqabto isbeddelada tan iyo booqashadii ugu dambeysay ee bogga.
Macluumaadkaaga Shaqsiyeed iyo Caafimaadka
"Macluumaad gaar ah" waxaa loola jeedaa xaqiiqooyin gaar ah oo loo isticmaali karo in lagugu aqoonsado ama lagula soo xiriiro shakhsi ahaan. Macluumaadka shakhsi ahaaneed waxaa ku jira, tusaale ahaan, magacaaga, cinwaanka gurigaaga iyo lambarkaaga telefoonka, taariikhda dhalashada, jinsigaaga, ciwaanka iimaylka ama macluumaadka kale ee adiga gaar kuu ah. "Macluumaad Shakhsiyeed" kuma jiraan macluumaadka tilmaamaya kombuyuutarka loo isticmaalo gelitaanka mareegtan. (Fiiri qaybta hoose ee ku saabsan "Cookies iyo macluumaadka kale ee ku saabsan booqashadaada.")
Waxaan ku ururinnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed mareegahan kaliya haddii aad na siiso.
Badbaadada Macluumaadka Caafimaadka iyo Macluumaadka Shakhsi ahaaneed
Waxaan ilaalinaa dhowr ilaalin jireed, elegtaroonig ah iyo habraacyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo lagana hortago gelitaanka macluumaadka aan la ogolayn ee lagu wadaago degelkan. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad xasuusnaato in aanu jirin nidaam si fiican uga hortegi kara qof aan la ogolayn in uu si ula kac ah u daawado macluumaadka inta ay ku dhex socoto internetka ama email ahaan. Sidaa darteed, HealthPartners ma dammaanad qaadi karaan sirta ama ammaanka macluumaadka aad noogu soo dirto internetka ama iimaylka. Intaa waxaa dheer, macluumaadka aad ogolaatay inaad la wadaagto qaybta "La wadaag Sheekadaada" ee mareegahan waxa laga dhigi doonaa mid laga daawado mareegahan oo laga dhigo mid diyaar u ah isticmaalka dadweynaha guud ee gelaya mareegtan.
Sida HealthPartners u isticmaalaan oo u wadaagaan macluumaadka shakhsiyeed
1. Waxa laga yaabaa in aan isticmaalno oo la wadaagno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee laga helo mareegahan shaqaalaheena, qandaraaslayaasha, iyo kuwa kale ilaa xadka lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka soo socda:
Si aad u bixiso badeecad ama adeeg aad codsatay ama iibsatay.
Si aan kuu soo diro macluumaadka aad codsatay, sida xigashada caymiska caymiska.
Si aan kuugu horumarino alaabtayada ama adeegyadayada.
Si aan awood kuugu siinno inaad naga siiso jawaab celin ku saabsan alaabtayada iyo adeegyadayada.
2. Waxa aanu wadaagi doonaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ilaa iyo inta lagama maarmaanka ah si loogu hoggaansamo amar maxkamadeed, amar maamul, sharci, qaanuun, xeerar, ama shuruudo la mid ah oo aan aaminsanahay si daacad ah ayaa sharci ahaan nagu waajibinaya inaan wadaagno.
3. Waxa laga yaabaa in aan u isticmaalno macluumaadka shakhsi ahaaneed ilaa xadka lagama maarmaanka ah si loo ilaaliyo mareegahayaga, xuquuqdeena, iyo in aan iska ilaalino ama yareyno masuuliyadayada. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaan isticmaalno Macluumaadka Shakhsi ahaaneed si aan u aqoonsanno qof u isticmaalaya shabakadeena ujeeddo sharci darro ah oo aan u bandhigno sharci fulinta ama qareennadayada si ay uga fiirsadaan qaadista tallaabo sharci ah.
4. Waxa laga yaabaa in aanu la wadaagno Xogta Shakhsiyeed hay’ad cusub oo na maamusha natiijada dib-u-habaynta shirkadaha, sida isku-dhafka, iibsiga ama is-beddelka, iwm.
Kukiyada iyo macluumaadka kale ee ku saabsan booqashadaada
Waxaan aruurineynaa macluumaadka ku saabsan booqdayaasha websaydkayaga anagoo adeegsanayna "cookies." iyo farsamada la midka ah. Kukigu waa fayl yar oo qoraal ah oo abuurma marka qof isticmaalo browser-ka si uu u booqdo mareegaha. Kukiyada waxa lagu kaydiyaa tusaha browserka kombayutarka ama kaydka xogta barnaamijka. Kukigu ma aha "xog gaar ah" sababtoo ah, iyada oo laga yaabo inay tilmaamto kombuyuutarka loo isticmaalo in lagu booqdo mareegaha, ma aqoonsanayo qofka soo booqda.
Inta badan mareegaha ugu waaweyn, oo uu ku jiro kan, waxay isticmaalaan cookies si ay uga caawiyaan booqdayaasha inay si guul leh ugu socdaan mareegaha iyo inay bixiyaan macluumaadka ku saabsan dhaqanka booqdayaasha taasoo naga caawisa horumarinta website-ka iyo barnaamijyadeena suuqgeyn, iyo in aan u habeyno khibrada khadka ee baahida isticmaalaha. Waxa kale oo laga yaabaa in aan u isticmaalno macluumaadkan si aan ugu habeeyo xayeysiisyada iyo wax-soo-saarka adiga, labadaba mareegahayaga iyo mareegaha kaleba.
Haddii aadan rabin in kombuyuutarkaaga lagu dhejiyo cookies, waxaad dejin kartaa biraawsarkaaga si uusan u aqbalin, ama gacanta ayaad ku tirtiri kartaa. Waa inaad xasuusataa, si kastaba ha ahaatee, in curyaaminta cookies ay xaddidi karto awoodda aad u leedahay isticmaalka qaar ka mid ah astaamaha degelkan.
Waxa laga yaabaa in aan isticmaalno sifooyinka falanqaynta iyo xayaysiisyada ay bixiso Google, oo ay ku jirto dib u suuq gaynta Google Analytics, Warbixinta Aragtida Shabakadda Google-ka, iyo Warbixinta Tirakoobka Google Analytics iyo Warbixinta xiisaha. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhaqamadan iyo inaad ogaato doorashooyinkaaga ku saabsan inaanan xogtan isticmaalin adeegayaasha xayaysiisyada sida Google, booqo Hindisaha Xayeysiiska Shabakadda . Qaar ka mid ah server-yada xayeysiiska ayaa kuu oggolaanaya inaad ka baxdo xog ururinta qarsoodiga adoo isticmaalaya cookies. Si taas loo sameeyo, waa inaad ka baxdaa xog ururintan oo kale goob kasta oo gaar ah. Waxaad ka bixi kartaa cookies-ka dhowr adeegayaal xayeysiis ah markaad booqato Hindisaha Xayeysiiska Shabakadda goobta ka bixista gateway. Goobtaas, waxa kale oo aad dib u eegi kartaa siyaasadaha khaaska ah ee adeegayaasha xayaysiisyada.
Ogsoonow in aanan hadda ka jawaabin biraawsarkaaga "ha la socon" ama "DNT" calaamadaha aad ku dhejin karto goobaha browserkaaga. Calaamadahaan waxaa loogu talagalay in lagu siiyo soo-booqdayaasha mareegaha fursad ay kaga baxaan aruurinta macluumaadka ku saabsan dhaqdhaqaayada onlaynka ah ee booqdaha waqti ka dib iyo guud ahaan mareegaha qolo saddexaad ama adeegyada khadka. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah hadda ma jiraan qeexitaan guud oo ku saabsan waxa calaamadahan oo kale ah iyo ma jiraan heerar la aqbalay warshadaha oo ku saabsan sida calaamadahaas loo fasiro; Ma ballanqaadeyno inaan u hoggaansanno calaamadaha DNT.
Server-kayaga waxa kale oo uu si toos ah u ururiyaa ciwaanka IP-ga (“Internet Protocol”) ee kumbiyuutar kasta oo soo gala website-kayaga. Ciwaanka IP-gu waa tirooyin taxane ah oo loo qoondeeyay kumbiyuutar kasta oo soo gala intarneedka. Ciwaanka IP-gu maahan Xogta Shaqsiyeedka sababtoo ah waxa lagu gartaa kombayutarka oo kaliya, ee ma tilmaamayo qofka isticmaalaya. Waxaan u isticmaalnaa cinwaanka IP-ga qaab wadar ahaan si ay nooga caawiyaan sameynta falanqaynta si aan u fahamno sida website-kayaga loo isticmaalo iyo sida aan ugu adeegi karno booqdayaasha.
Mareegtan waxa laga yaabaa inay ka koobnaato xidhiidhyada shabakadaha ay maamulaan qolo saddexaad oo aan HealthPartners ahayn. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Mareegtan waxa ay khusaysaa mareegahan oo kaliya ee maaha goob dhinac saddexaad ah oo aan ku xidhi karno. HealthPartners mas'uul kama aha mana laha wax ay gacanta ku hayaan siyaasadaha gaarka ah iyo dhaqamada boggaga saddexaad ee aanu ku xidhno waxaanan kugu dhiirigelinaynaa inaad akhrido bayaanada sirta ah ee shabakad kasta oo kaa codsata Macluumaadka Shakhsi ahaaneed ka hor intaadan bixin wax macluumaad ah .
Dhammaan su'aalaha iyo walaacyada ku saabsan sirtaada waa lagu soo diri karaa littlemomentscount@healthpartners.com ama boostada loogu diro:
Fiiro gaar ah: Daqiiqado yar ayaa la tirinayaa